Nwere ike ịchọrọ ọkachamara n'ịntanetị Email Ọ bụrụ ...
Ebumnuche a ka ọ bụrụ ihe enyemaka maka ndị, kwenye, maara na ha nwere ike ịbawanye uru site na email. N'agbanyeghi ma ọ bụrụ na ị kpebie ịkpọ ndị ọkachamara n'èzí, dịka otu email ahịa gị n'ụlọnga, ma ọ bụ talent n’ime ụlọ; Ntuziaka a ga - enyere gị aka ịtụle ma nyochagharịa mbọ ị na - eme ugbu a email.
Ka anyị lelee Ọnụ Ọgụgụ
Email abụrụla ebe ahịa na-ere ahịa kemgbe afọ iri, ọ ga-abụ na ọ gaghị agbanwe n'ọdịnihu dị nso. Ọ na-enye ohere ịchebe n'ihi na ọ na-ebugharị data. Ọ na-anya ahịa. Ọ na-ewulite mmekọrịta, iguzosi ike n'ihe na ntụkwasị obi. Ọ na-akwado ahịa site na ọwa ndị ọzọ:
Dị ka Ndị na-ere ahịa ahịa, Ahịa email mepụtara ROI nke $ 43.62 maka dollar ọ bụla ejiri ya, nke ahụ bụ okpukpu abụọ nke nke mbụ na-agba ọsọ.
Nchịkọta site na Azụmaahịa na-ekwu, Ndị na-ahụ ịdị irè nke mmemme email ha na-ebelata na-yikarịrị ka ha nwere ikike ịhazi usoro ịhazi usoro ahụ. Tù na-ahazi itinye aka na itinye ego na email na-enweta ụgwọ ọrụ.
The Kọmitii CMO'Outlook' Outlook '08 Report nyochaa atụmatụ na echiche nke ndị ahịa 650. Email marketing bụ ebe kachasị mkpa maka itinye ego.
Na nyocha nke ndị na-ere ahịa, Plọ ahịa kwuru na "E-mail bụ ihe a kpọtụrụ aha nke ọma n'ụzọ zuru ezu".
Jikwaa Email Marketing Na-ụlọ?
Ọ bụrụ n’inweghị mmekọrịta ụlọ ọrụ dị ugbu a ma ọ bụ na ị nwere ikike ụlọ zuru oke, tụlee nke a:
Gị (nke pụtara gị ma ọ bụ ndị otu gị) maara azụmahịa gị; ị makwaara nke ọma na ịre ahịa email?
Ọ bụrụ ee, ị nwere oge na ume iji bulie mbọ ahụ?
Kedu ka ahịa azụmaahịa gị na CRM ga-esi atụnyere ndị asọmpi gị?
Mgbasa ozi email gị ọ na-ere ahịa, na-ewuli iguzosi ike n'ihe, ma belata ọnụahịa ahịa?
Emere mmemme email gị na nyocha na / ma ọ bụ data akụkọ ihe mere eme?
Ọrụ ị na-arụ n’ụlọ ọ̀ na-eme ka ọ ghara imefu gị ego?
Ready nweela ọkachamara?
Ọ bụrụ n’inwere ụlọ ọrụ na-ere ahịa ma ọ bụ enyemaka ndị ọzọ na-esote, jụọ onwe gị:
Hà nwere ọpụrụiche na email ma ọ bụ ha zuru ezu ọrụ?
Ha na-ewepụta ROI nke kwekọrọ na nchọta dị n'elu?
Hà na-eche banyere anyị n’enweghị mkpali?
Ha ghọtara ahịa anyị na usoro azụmaahịa anyị?
Hà enyochapụtala ma chọpụta etu nhọrọ niile dị?
Ọrụ ha ọ bụ maka ọhụụ, nke na-atọ ụtọ, na nke na-egosipụta omume kacha mma?
Iberibe Email Marketing Equation
Marketingre ahịa email nwere ike ịgụnye nnweta ndị ahịa, iduga nurturing, imeghachi ndị ahịa yana njigide, yana ọrịre ahịa, nke pụtara na ọtụtụ usoro na ọrụ nwere ike itinye aka, gụnyere:
Atụmatụ & Nnyocha
Nhazi ederede na Nkwado
Detuo ederede na ederede ọdịnaya
Nhazi & Ndenye
Ndepụta Uto & Owuwu Obodo
List nkewa & List Mmezi
Behavioral & Ahịa Profaịlụ
Ozi nzipu & nleba anya
Ndị na-eweta Email Email (ESP) ma ọ bụ Nyocha ilinglọ Nzipu ezinaụlọ
Idu Nurturing & Direct / Up / Cross Ahịa
Multivariate Ule & Mmemme Mmemme
Ọ bụrụ na ndepụta ndị dị n'elu gụnyere ihe karịrị ị na-eme, nke a nwere ike ịbụ ihe ngosi siri ike na ị na-ejighị ọwa a na-akwụ ụgwọ. Ikekwe ọ bụ oge maka onye ọ bụla na-ere ahịa ọhụụ ma ọ bụ ma eleghị anya ịkwesịrị ịhazigharị ego na / ma ọ bụ nye ndị otu ụlọ gị ọzụzụ ọzọ?
Y’oburu n’ichoo na ichoro enyemaka, juo nu. Na nkeji nke abụọ na nke ikpeazụ, anyị ga-atụle otu esi achọta na inwale onyinye tozuru etozu dabara na mkpa gị pụrụ iche ma zute mmachi mmefu ego gị.
Tags: cmo kansulmwekota crmKpọkọta mkpakọrịtaemail na mkpọsaemail crmemail mwekotaemail MarketingỤlọ ọrụ na -ere ahịa Emailemail ahịa ọkachamaraemail ahịa nloghachi na egoemail njikarịchaozi emailAzụmaahịaretailụlọ ahịa.org
Jenụwarị 8, 2010 na 3:10 PM
Scott - nke a bụ ọkacha mmasị m post nke gị ruo taa. Ndụmọdụ dị egwu! Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-alụ ọgụ maka akụ ha nwere ma ghara iru ike ha. Nke ahụ bụ ebe iso ndị ọkachamara na-emekọrịta ihe bụ oke mkpebi mgbe niile!
Jenụwarị 8, 2010 na 3:41 PM
Daalụ Doug! N'akụkụ nke abụọ, aga m edepụta ụkpụrụ ụkpụrụ nduzi 8 ka ị were ego ọkachamara n’ahịa email.